खेलकुद मन्त्रालय गृह मन्त्रालय भन्दा बलियो बनाउछु : मन्त्री गुरुङGandaki Press
खेलकुद मन्त्रालय गृह मन्त्रालय भन्दा बलियो बनाउछु : मन्त्री गुरुङ
भदौ २८, २०७८ ०८:१३ मा प्रकाशित
गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे) ले प्रदेशको खेलकुद मन्त्रालयलाई गृह मन्त्रालय भन्दा बलियो बनाउने बताएका छन् । मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा युवाहरुको ताती रहेको बताउँदै युवालाई स्वरोजगार सहित सुरक्षाका क्षेत्रमा युवालाई अघि बढाउने बताएका हुन् ।
‘साढे ३ वर्षसम्म सरकारले केही गरेन । यो मन्त्रलायमा युवा धेरै छन् मैले गर्ने वातावरण पाएभने गृहमन्त्रालय भन्दा शक्तिशालि मन्त्रालय बनाउँछु’ उनले भने । आइतबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राख्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । गुरुङ मन्त्री भएको ६० दिन पुगेको छ । उनले मन्त्रालयमा बजेटको अभावले धेरै कामहरु रहेपनि केही गर्न नसकेको बताए । उनले नेपालका नेताहरुले खेलकुदलाई अझै बुझ्न नसकेको संकेत गरे । ‘कहाँ यस्तो ठाउँमा आएर मरेछु । जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्दै आएकाहरु खेलकुदमा देख्दा अचम्म लाग्यो । त्यसतोले खेलकुदको विकास कसरी गर्छन ? खेलाडीका लागि अभ्यास मैदान समेत देख्दिन ’ उनले भने,‘ अझ कास्कीमा हेर्ने हो भने त रंगशालाभित्र शौचालय सफा गर्ने कर्मचारी देखि लिएर पत्रकारसम्म एमालेकै देखेँ यीनहरुले कसरी खेलकुदको विकास गर्लान ?
उनले खेलकुदमा समेत ठुलो राजनीति हुदैँ आएको बताए । नेताहरुले रक्सीको बिल खेलकुदको नाममा नै पास गर्ने देखेँ त्यो गर्दा युवा समेत खुसी हुने कस्तो सिस्टम । खेलाडीको भविष्य प्रति कसैलाई चासो नै रहेनछ ।’ उनले खेलकुदको नाम बेचेर नेताहरुले खाने गरेको आरोप लगाए ।
सोही क्रममा बोल्दै उनले आफ्नो सम्पत्ति बारे आफै कन्फ्युज रहेको बताए । गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले सम्पत्ती विवरण बुझाउँदै गर्दा नबुझाएको भनेर प्रश्न गर्दा उनले आफैलाई कति भन्ने अन्योल भएको बताए । ‘म आफैँ कन्फ्युजमा छु । मेरो सम्पत्ति कति छ भन्ने कुरामा । मेरो पहिलाको श्रीमतिको नाममा छोराछोरीको नाममा छ’ उनले भने । डिभोर्स भएका कारण आफ्नो सम्पत्ति भन्ने वा नभन्ने द्धिविधा रहेको सुनाए । ‘मैले छैन भन्न खोजेको भने होइन् । तपाईँहरुले फेरी बुझाउन खोजेन भन्नुहोला अब कतिलाई दिएको छु यति आउन बाकीँ छ भनेर पनि भएन । धेरै केटाहरुलाई ऋण दिएको छु । अलि अलि भएको पनि मुद्दामामिलामा छ ’ उनले भने । आफूलाई पहिलो पटक नेपालमा सम्पत्ति सुदिकरणको मुद्दापरेको उनले सुनाए । ‘मैले पनि हुण्डीको कारोबारी गरे । त्यो बेला कानून थिएन । अहिलेको कानूनले मलाई कारवाहि गर्न मिल्दैन त्यतिबेला अदालतमा लगेको थियो । न्यायधिशकै छोराले समेत हुण्डी गरेकै हो त्यसैले मलाई छाडिदियो ।’
मन्त्री गुरुङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ५७ करोड रहेपनि २४ करोड पहिलेकै योजनामा खर्च हुने उनले बताए । अब पहिलाको योजनालाई त्यसै खेर जान नदिने बताउँदै उनले उक्त योजनालाई समेत पुरा गर्ने बताए । मन्त्रालय अन्तर्गत युवा स्वरोजगारमा ४० तथा खेलकुदमा ६० प्रतिशत खर्च गर्ने भनिएपनि रकम कम भएकाले युवा स्वरोजगारको रकम समेत खेलकुद तर्फ हालेको सुनाए । उनले तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११ जिल्लालाई २ करोड रुपैँया र बाग्लुङ, म्याग्दीमा ४ करोड छुट्याएको बताए । प्रदेशमा भन्दा निश्चित जिल्लाको रकम धेरै हुदाँ काम गर्न समेत निकै समस्या आएको उनले बताए । ‘राजनीति हुनु हुदैँन । मैले मनाङका केटाहरुले ठुलो रकम माग्दा त्यहाँ काम छैन भने । अहिले केटाहरु रिसाएका छन्’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा हुने नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि समेत बजेट विनियोजन हुने बताउँदै आवश्यक पूर्वाधारको निमार्ण हुने र प्रतियोगिता हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताए ।